Kuvaka Michina Vagadziri - China Kuvaka Michina Factory & Suppliers
3cbm hombe yemhando nyowani inorodha kongiri yekusanganisa rori
1. Iyo muchina pachayo idiki uye inochinjika, inogona kutenderera 180 madhigirii pachayo, akakodzera kune ese mapurojekiti, pasina zvirambidzo paurefu, hupamhi, nezvimwe.
2. Tangi yekusanganisa, blade yekusanganisa uye chimiro chezvigadzirwa zvedu zvese zvigadzirwa zvine patent yakagadzirwa isu pachedu.
3.Konkrete iyo inomutswa inosangana nehurumende yenyika uye yeEurope, uye vatengi vanogona kuishandisa nechivimbo.
4. Ndeyemotokari dzeinjiniya, unogona kupinda mumugwagwa usina rezinesi plate.
1. Self loading concrete mixer, iyo inogona kuchengetedza 3 labor uye 100 kw.h zuva rega rega, nokuti haidi musanganisi, kongiri rori uye kurodha muchina.
2. Tafura yekushandisa tebhu inogona kutenderedzwa, uye musanganisi anogona kutyaira bi-directionally Zviri nyore.
3. Iyo yekurasa basa inogona kuita kuti kurodha zvakanyanya uye nekukurumidza.
4. Zvinonyanya nyore uye zvinokurumidza kuwedzera mvura nepombi yekuzvisveta.
Yepakati uye Diki-Sizi Simba Kuzvichengetedza Kurodha Motomixer
SITC inorodha kongiri musanganiswa yakakwidziridza bhaketi pasi basa kubva kumusanganisi wekurodha kuti unyatsoona basa rekurodha remushini.Panguva imwecheteyo, brake caliper yakawedzera kushanda kwebhureki uye yakashongedzerwa neakanyanya-kumanikidza kugeza mota kuchengetedza michina yakachena, uye yakawedzera tangi remvura kuti iwedzere. Kubuda.Panguva ino, SITC inorodha kongiri musanganiswa inonyatso ziva basa re-multi-chinangwa rekurodha, kubvongodza, kufambisa, kugeza mota, nezvimwe.
Yakanyanya Kubudirira Self Loading Concrete Mixer inoshandiswa muKusanganisa Simende
Self Loading Concrete Mixer imhando yemuchina unoshanda unosanganisa musanganiswa wekufambisa, musanganiswa wekongiri uye vhiri rekurodha pamwechete.Inogona kurodha, kuyera, kusanganisa uye kuburitsa musanganiswa wekongiri.Iyo otomatiki yekurodha musanganiswa rori inogona kurodha kongiri zvinhu zvakaita sematombo, jecha, simende, uye mvura mutangi rekusanganisa yega.
2cbm kongiri musanganisi tuck
Misanganisi yekongiri yekuzvidyisa yakasarudzika michina yakagadzirirwa batch, kusanganisa uye kutakura kongiri.Kushanda kwezvimedu zvekongiri zvinosanganisa mabhechi uye inosuma zvinodikanwa pakusanganisa kongiri mudhiramu uchishandisa bhaketi rekurodha.Ngoma yacho inowanzo shandurwa mhando,inorereka mhando. kana musanganiswa wezvose.
Kuzvidyisa kongiri musanganiswa wakakodzera nzvimbo dzekuvaka uko kongiri yekubatisa zvidyarwa zvisipo, pasi petsoka mamiriro haakodzeri makongiri ekufambisa anosanganisa marori kana kuwanikwa kwevashandi kushoma kana kumanikidzwa.
3.5cbm self loadong kongiri musanganisi rori 270 dhigirii tenderera chigubhu
Kuzvitakura wega (auto feeding) kongiri yekusanganisa rori
SITC 5500 Model musanganiswa rori Mabasa:
kuzvidzora kongiri musanganisi rori 2cbm 180 dhigirii kutenderera
Muchina wacho pachawo mudiki uye unochinjika, unogona kutenderera 180 madhigirii woga, unokodzera mapurojekiti ese, pasina kurambidzwa paurefu, hupamhi, nezvimwe.
1cbm otomatiki feed kongiri musanganiswa rori ine loader bucket
Auto kudyisa kongiri musanganiswa rori 1cbm ine loader bucket
SITC 1500 Model musanganiswa rori Mabasa:
Muenzaniso 1500 Concrete Mixer Turck Zvakanakira:
Muchina wacho pachawo mudiki uye unochinjika, f, wakakodzera kune ese mapurojekiti, pasina zvirambidzo pahurefu, hupamhi, nezvimwe.